kufuduka Board: Ayikho indawo ukukhoseliswa Holm | Holmbygden.se
Posted on 15 Agasti, 2014 ngu Holmbygden.se
Cishe esikhathini esingangonyaka esidlule, kwaba ukusebenza ngo Holm. Tjugiotalet abasebenzi angaphandle wasebenza zokugcina ukuze bathuthukise izindawo ngesikhathi kuhlolwa Migration weBhodi.
Ngeke kusaba khona yokuhlala ukukhoseliswa eyayidume ngokukhulekela Aros Energy nezimemezelo i Holm, Tobo (Uppsala) kanye sebuningini nakwezinye izindawo. Migration Board sinqatshiwe ezinsukwini izicelo zabo ukukhoseliswa yokuhlala e isinqumo nokwabiwa entsha ngoba yesikhashana ukukhoseliswa yokuhlala. Ukungaqiniseki emnothweni ubunikazi isakhiwo ngemuva ibhizinisi bebelokhu ezinye zezizathu.
I izinkambo bebelokhu amaningi emhlabeni notorious Aros Energy nezimemezelo kanye nezixhumanisi olahlwe yicala uJohan Stendahl ekuqaleni wathenga “Ezezindlu kathisha” futhi “Pensionärshemmet” iminyaka engaba yishumi edlule. Kulo nyaka yena sasitholakala kuyi Business Week njengoba omunye enkulu yentela evaders ne intela ngokugcwele 281 abayizigidi ezingu.
Okubizwa ngokuthi “Skandalhusen” i Anundgård saleli shumi lokugcina leminyaka zinguquko ubunikazi eziningana negama wake entsha inkampani ephepheni. Okwamuva wabanikazi kwaba Aros Energy nezimemezelo okuyinto ekuqaleni wabheka ihlanzekile. Le nkampani ephethwe cishe ngonyaka odlule ukuze uthole imvume Swedish Migration Board ngezinqumo zabo Kwabiwa ukuvula yokuhlala ukukhoseliswa Holm.
Ngokushesha kwaba ngemva ukwamukelwa abonisa ukuthi Aros Energy nezimemezelo babe inkampani ngaphambi nje kokuba isicelo Immigration Service yayisisezandleni. Omunye wamasheya inkampani wazibonakalisa uJohan Stendahls nommeli Michael Sterner. Enye shareholder kwaba UMlungisi Hambergs Fagerhyltan. Fagerhyltan kwaba nkampani ukuthi wathenga amakhaya e Holm abaseduze ngemva uJohan Stendahl ngonyaka 2011. UMlungisi Hamberg inqatshelwe ekuqaleni noma yikuphi ukuzihilela e Aros Amandla nezimemezelo, amadoda ngalesosikhathi phendla Mission Review.
Lokhu kwalandelwa eyodwa scandal ngemva kwenye off ugesi ukuze umndeni nezingane emakhaya abo, abavukuzi angaphandle Holm, izikweletu ezingakhokhiwe, umonakalo isikhunta, kuxoshwa abantu abaningi abaqashile, ukulahlekelwa iqhwa inhlabathi kanye utshani ugunda, izingxabano nge Arbetsmiljöverket, Isakhiwo, Ihhovisi Environmental, kufuduka Board, amasevisi eziphuthumayo, M.W..
SVT uye kuvezwa Ukusaphazwa Aros Energideklarationers e Holm.
isinqumo Amasha Migration Board
Phela, okwatholakala Aros Energy nezimemezelo futhi yayo isakhiwo ubunikazi manje Migration Board has isinqumo nokwabiwa entsha ukuze kuthengwe yesikhashana ukukhoseliswa yokuhlala. Isinqumo uveza nokuthi Aros Energy nezimemezelo Akasekho afanelekayo ukugijima yokuhlala ukukhoseliswa ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Aros Energy isitifiketi AB, Tenderer akagcwalisi imfuneko ngaphansi lento 3.2 isimo komnotho ezibekiweko – ebomvu Creditsafe futhi ekilasini 1 i UC. okwamanje kukhona 22 Izicelo yokukhokha ku IsiSwidi Enforcement Authority. Ngaphezu kwalokho, kuye kwavela ukuthi ulwazi olungalungile Kuye kwanikezwa e ibhidi yenkampani, bl.a. eliphathelene nokuvikela umlilo. Ngaphezu kwalokho, kuyoba khona ukungabaza ngokuthi isakhiwo ubunikazi inkampani.
Migration weBhodi izinto ezinhlelweni zokuthenga yezifiso 2014
izinqumo Migration Board Kwabiwa 2014